Isitudiyo/iApartment kwiTops yemithi*WiFi*Netflix*Jonga
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGail
Kwiindwendwe zam ezininzi kodwa ngakumbi abaphenduli bokuqala abenza uninzi. Enkosi ngokuzinikela kunye nenkonzo yakho. Gail
Iindwendwe zam zithi "zithule kakhulu" kwaye "zicoceke kakhulu". Umjikelo wokubuyela umva a/c, d/washer, umatshini wokuhlamba, iNetflix kunye neWiFi. Indawo yokupaka. Umgama olula wokuhamba ukuya kwiSibhedlele saseJoondalup, iZiko lesiXeko, uLoliwe, i-ECU, iSikolo samaPolisa kunye ne-TAFE.
Relax ngechibi okanye ukuhamba ngehlathi kufutshane
Ukuba istudiyo sibhukisiwe jonga iiNzulu Zemithi SUITE inokufumaneka ku-Airbnb control-your-space/26887610/iinkcukacha
Isitudiyo/igumbi liziphethe ngokwalo ngomnyango walo wabucala kunye nomgangatho.
Qaphela: Le ndlu ingezantsi ikwafumaneka kwiindwendwe ze-AirBnB, ezirentwa ligumbi.
4.91 · Izimvo eziyi-154
Kwindawo ethe cwaka yokusebeza kunye nokuhamba imizuzu nje ukuya entliziyweni yesixeko saseJoondalup. Indawo yokuhlala ikufuphi kwiindawo ezininzi ezinomtsalane ePerth. Kuphakathi kweekhefi, iivenkile zokutyela, iibhari ezidlamkileyo, ipaki yesizwe, iindawo zemidlalo, iinkundla zegalufa, iicinema, amabala okudlala abantwana kunye neemarike. Ukufikelela ngokulula kwiziko lokuthenga elikhulu eLakeside, iDyunivesithi yase-Edith Cowan, iSikolo samaPolisa, iSibhedlele saseJoondalup, iSikhululo sikaloliwe saseJoondalup, iNeil Hawkins Park enechibi kunye neendlela zokuhamba kunye neekhefi. Ukufikelela ngokulula kwiMitchell Freeway kumgama omfutshane wemizuzu engama-25 ukuya ePerth CBD kunye nemizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya elunxwemeni.
Nokuba uhamba ngomsebenzi okanye ukuzonwabisa, uya kukuxabisa ukuba nolwandle, indawo yokuthenga ekumgangatho wehlabathi kunye nezithuthi zikawonke-wonke emnyango wakho. Indawo yethu ephambili yenza kube lula ukufikelela kwezona ndawo zinomtsalane ukuze uhlale phantsi, uphumle kwaye wonwabele iholide yakho kwindawo enoxolo.
IsiXeko saseJoondalup likhaya kuthotho lwezinto ezimnandi nezinomtsalane zasekhaya ezibotshelelwe ukwenza ukuhlala kwakho kwindawo yethu kube yinto ekhunjulwayo. Ezinye izinto ezinomtsalane ziquka iMullaloo Beach, Burns Beach kunye neOcean Reef, ezikumgama nje wemizuzu eli-10. I-Hillary's Marina ithandwa kakhulu ngabatyeleli kunye nabemi ngokufanayo kwaye yimizuzu eyi-15 kuphela. Zininzi iindawo zokutyela kunye neekhefi, iiklabhu zasebusuku kunye neethaveni, iivenkile ezithengisayo. Isikhephe esiya eRottness Island sihamba mihla le, kwaye kukho iiseyile eziqeshiweyo kunye nohambo lokuloba ukuze uthathe ithuba lokuhamba usuku. Kufuneka uyibone eyona poplar 'AQWA', indawo enomtsalane ephantsi kwamanzi apho unokuhamba khona kwi-aquarium kwitonela yeglasi.
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Ukuba ufuna nantoni na qhagamshelana ne-imeyile ye-Airbnb. Uya kukwazi ukuzihlola xa ufika.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Joondalup